ကျမ္မာရေး ဗဟုသုတ Archives - Channel Lover
ရုတ်တရက် လေဖြတ်လျှင် ချက်ချင်း အကောင်းပကတိ ဖြစ်အောင် ပြုစုကုသနည်း
January 15, 2022 by Channel Lover
ရုတ်တရက် လေဖြတ်လျှင် ချက်ချင်း အကောင်းပကတိ ဖြစ်အောင် ပြုစုကုသနည်း လေရောဂါသည် အသက် (၄၀) နှင့် (၆၀) ကြား အဖြစ်များပါသည်။ အအေးများရာက လေ အထက်သို့ ဆောင့်တက်၍ လေဖြတ်ပြီး ပါးရွဲ့၊ ခြေထောက်ဆာ၊ ခြေလက်တို့ လှုပ် မရအောင် ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ရုတ်တရက် လေမိသူကို ယခု တင်ပြမည့် နှိပ်ကွက်လေးများဖြင့် နှိပ်ပေးပါမည် ဆိုလျှင် ပျောက်ကင်း သက်သာမှုကို ရရှိစေပြီး လွယ်ကူစွာ ရှင်းရှင်း ပြတ်အောင် သက်သာ ပျောက်ကင်းစေပါသည်။ နှိပ်ကွက် (၁) ခြေမျက်စိနှင့် နောက်တွင် ကပ်နေသော သွေးပြန်ကြောကို ခပ်နာနာလေး နှိပ်ပေးပါ။ နှိပ်ကွက် (၂) ခြေဖဝါး အလယ် ဘေးသားက အကြောကို ကျေညက်အောင် နှိပ် … Read more
ဆောင်းတွင်း နှာခဏခဏစီးနေသူများအတွက် ပူစရာမလိုတော့ဘူး…
December 3, 2021 by Channel Lover
ဆောင်းတွင်း နှာခဏခဏစီးနေသူများအတွက် ပူစရာမလိုတော့ဘူး… လန်ဒန်မှာပညာတော်သင်ရောက်နေတဲ့ ဆရာဝန်လေးတစ်ယောက်က နှာခဏခဏစီးနေလို့ လန်ဒန်မှာနေတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတစ်ယောက်အိမ်ကို အလည်သွားရင်း ဘာဆေး သောက်ရမလဲလို့မေးတဲ့အခါ… ဆရာဝန်ကြီးက သူဇနီးကို ငါစားနေကြဆေးလေး လုပ်ခဲ့ပါဦးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါ ခဏကြာတော့ ကြက်သွန်ဖြူ မီးဖုတ်တွေ ပန်းကန်လေးနဲ့ထည့်ယူလာပါတယ်။ အဲဒါစား ဘာဆေးမှသောက်စရာမလိုဘူးတဲ့ စားပြီးတဲ့နေ့ကစပြီး သက်သာသွားပါသတဲ့။ အခုလည်း နှာတစ်ချိန်လုံးစီးနေတဲ့သူကို ဒီနည်းပေးပြီးစားခိုင်းတော့ သက်သာလို့ပါတဲ့ ခင်ဗျာ။ ။ #Credit; Original Uploader. #တဆင့်ပြန်လည်မျှဝေပါတယ်… unicode ဆောငျးတှငျး နှာခဏခဏစီးနသေူမြားအတှကျ ပူစရာမလိုတော့ဘူး… လနျဒနျမှာပညာတျောသငျရောကျနတေဲ့ ဆရာဝနျလေးတဈယောကျက နှာခဏခဏစီးနလေို့ လနျဒနျမှာနတေဲ့ ဆရာဝနျကွီးတဈယောကျအိမျကို အလညျသှားရငျး ဘာဆေး သောကျရမလဲလို့မေးတဲ့အခါ… ဆရာဝနျကွီးက သူဇနီးကို ငါစားနကွေဆေးလေး လုပျခဲ့ပါဦးလို့ပွောလိုကျတဲ့အခါ ခဏကွာတော့ ကွကျသှနျဖွူ မီးဖုတျတှေ ပနျးကနျလေးနဲ့ထညျ့ယူလာပါတယျ။ အဲဒါစား ဘာဆေးမှသောကျစရာမလိုဘူးတဲ့ … Read more
November 29, 2021 by Channel Lover
ခဈြသူနှငျ့ ၇ နှဈကွာအတူနပွေီး တားဆေးမြားကိုနစေ့ဥျသောကျခဲ့ရာ ကနျြးမာရေးထိခိုကျပွီး ဆေးရုံတကျရသောအခါ ကလေးမရနိုငျတော့ကွောငျး သိရလိုကျရသဖွငျ့ ခဈြသူ၏စှနျ့ပဈခွငျးကိုခံရသော မိနျးကလေး။ ယနခေ့တျေကွီးထဲတှငျ လူငယျအခြို့၏ ဖွဈပကျြနပေုံမြားအကွောငျးကို လူအမြားစုတို့လညျး သတိထားမိကွမညျဟု ထငျမိပါတယျ။ ယခုတှငျတော့ ဗီယကျနမျနိုငျငံမှ ကောငျမလေးတဈဦးဟာ သူမမစဥျးစားမိခဲ့သညျ့ မိုကျမဲသောအဖွဈကွောငျ့ နစေ့ဥျငိုကွှေးရငျးနောငျတရနခေဲ့ရပါတယျ။ ကောငျမလေးဟာ သူ၏ခဈြသူနှငျ့အတူ ၇ နှဈကွာသညျအထိအတူတူနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အတူနထေိုငျသောအခြိနျ၌ လကျမထပျရသေးသဖွငျ့ ကလေးမရစရေနျ တားဆေးမြားကို နစေ့ဥျသောကျသုံးခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။ ၇နှဈကွာအောငျ သောကျခဲ့မိသညျ့ ဆေး၏ဒဏျမြားကွောငျ့ ကနျြးမာရေးထိခိုကျကာ ဆေးရုံသို့အရေးပျေါကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယျ။ ထိုအခြိနျတှငျ ကောငျမလေးဟာ ကလေးမရနိုငျတော့ကွောငျး ဆရာဝနျထံမှ သိရှိလိုကျရသောအခါ ကောငျမလေး၏ခဈြသူဟာ ကောငျမလေးကို တဈယောကျတညျးထားခဲ့ပွီး စှနျ့ပဈခဲ့ပါတယျ။ Zawgyi ချစ်သူနှင့် ၇ နှစ်ကြာအတူနေပြီး တားဆေးများကိုနေ့စဉ်သောက်ခဲ့ရာ ကျန်းမာရေးထိခိုက်ပြီး ဆေးရုံတက်ရသောအခါ ကလေးမရနိုင်တော့ကြောင်း သိရလိုက်ရသဖြင့် ချစ်သူ၏စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရသော … Read more
November 27, 2021 by Channel Lover
အလွန်ကူးစက်မြန်သော ကိုဗစ်မျိုးစိတ်သစ် Omicron တောင်အာဖရိကတွင် စတင်တွေ့ရပြီး ယခင်ကိုဗစ်ပိုး ထက် ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းအဆ ၅၀၀ မြန်ဆန်၊ ကာ ကွယ်ဆေး မတိုးနိုင်တော့၍ တစ်ကမ္ဘာလုံး ဝရုန်းသုန်းကားဖြစ် ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၇ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက Omicron ကိုဗစ်မျိုးစိတ်သစ် ကူးစက်လာမှုသည် စိုးရိမ်စရာကောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကိုဗစ်မျိုးစိတ်သစ်သည် ဗီဇပြောင်းလဲမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီး အစောပိုင်းအထောက်အထားများက ပြန်လည်ကူးစက်နိုင်ခြေ တိုးလာကြောင်း WHOက ပြောကြားသည်။ တောင်အာဖရိကမှ WHO သို့ နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်က ကိုဗစ်မျိုးစိတ်သစ် ကူးစက်နေကြောင်း အစီရင်ခံခဲ့ပြီး ဘော့ဆွာနာ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ဟောင်ကောင်နှင့် အစ္စရေးတို့တွင် Omicron မျိုးစိတ်သစ် ကူးစက်မှုများ တွေ့ရှိရပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ယခုအခါ နိုင်ငံအများအပြားသည် အာဖရိကတောင်ပိုင်းသို့ ခရီးသွားခြင်းနှင့် တောင်အာဖရိကမှ … Read more
အမောလည်းပျောက် အားလည်းရှိမယ့် ချောင်းဆိုးသွေးပါ ပန်းနာရင်ကြပ် တီဗီ အမြစ်ပြတ်ပျောက်ဆေးနည်း…
November 20, 2021 by Channel Lover
အမောလည်းပျောက် အားလည်းရှိမယ့် ကြက်ဥနဲ့ကြက်သွန်ဖြူ… ချောင်းဆိုးသွေးပါ ပန်းနာရင်ကြပ် တီဗီပျောက်ဆေးနည်း ကြက်ဥနဲ့ကြက်သွန်ဖြူ#🥚🧄 ချောင်းဆိုးသွေးပါ ပန်းနာရင်ကြပ် TBပျောက်ဆေးနည်း လက်တွေ့ပျောက်ကင်းလို့စေတနာရှေ့ထားဆေးနည်းလေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမေလက်တွေ့ပါ။ချောင်းကတဟွတ်ဟွတ်သွေးစလေးတွေပါ ပါသေးတယ်။. မောလိုက်တာကလည်းဖိုထိုးနေတဲ့အတိုင်းပါပဲ။အသားရည်ကလည်းညိုညစ်ညစ်မခံစားနိုင်ဘူးပေါ့။ ကံကောင်းချင်တော့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆီက ဆေးမီးတိုနဲ့ ရောဂါအမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းခဲ့ပါတယ်။ ဆေးနည်းမှာ___အိမ်မွေးကြက်ဥ တစ်လုံးထက်ခြမ်းခွဲ ပန်းကန်တလုံးထဲထည့်။ ကြက်ဥအခွံတစ်ခြမ်းဖြင့်နှမ်းဆီစစ်စစ်ထည့် ၊ ကြက်သွန်ဖြူ တစ်လုံးအခွံနွာပါးပါးလှီးဖြူးထည့်။ ဒန်အိုးထဲရေအနည်းငယ်ထည့်အောက်မီးနှင့်ကြက်ဥကိုပေါင်း၊ ခဏနေကျက်ပြီ တစ်နေ့သုံးကြိမ်စားပေးခြင်းဖြင့် အမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါသည်။ ဘယ်လောက်ကြာအောင် စားရမလည်းဆိုတာကတော့ ရောဂါ အနု၊ အရင့်ပေါ်မူတညိပါသည်။ အကုန်အကျသက်သာ၍ လွယ်ကူသောနည်းလမ်းလေးမို့ ဤရောဂါခံစားနေရသူတိုင်း လက်တွေ့အသုံးချခြင်းဖြင့် မုချပျောက်ကင်းနိုငါကြပါစေ…..။။။ မေတ္တာဖြင့်….JujuLwin Credit_LaWoneEain ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေရန် ဆေးနည်း အိမ်မွေးကြက်ဥတလုံးထက်ခြမ်းခွဲ ပန်းကန်တလုံးထဲထည့်။ (တလုံးလုံးပါ) ကြက်ဥအခွံတခြမ်းဖြင့်နှမ်းဆီစစ်စစ်ထည့် ကြက်သွန်ဖြူ တလုံးအခွံနွာပါးပါးလှီးဖြူးထည့်။(နှမ်းဆီကိုကြက်ဥအခွံတခြမ်းစာပမာဏကိုပြောတာပါ) အကုန်တူတူပေါင်းပြီးဒန်အိုးထဲရေအနည်းငယ်ထည့်အောက်မီးနှင့်ကြက်ဥကိုပေါင်းခဏနေကျက်ပြီ တနေ့သုံးကြိမ်စားအမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းကြောင်းသတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါသည် Credit to OK … Read more
ခြင်တွေက သင့်ကိုပဲ ရွေးကိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
November 16, 2021 by Channel Lover
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသော လူတွေကတော့ ခြင်တွေရဲ့ ရူးရူးမူးမူး စွဲမက်နှစ်ခြိုက်ကိုက်ခြင်းကို ခံနေရတဲ့ သူတွေပါတဲ့။ သင်ရော အဲဒီ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေထဲမှာပါနေပြီလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ခြင်တွေက လူတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှ သင့်ကိုပဲ ရွေးပြီးကိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို သိဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ ဘာအကြောင်းရင်းတွေကြောင့် အမြဲ ခြင်တွေရဲ့ သားကောင်ဖြစ်နေရလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။ အဝတ်အစား ခြင်တွေကတော့ သူတို့ရဲ့ သားကောင်ကို အမြင်နဲ့ပဲ ရှာဖွေလေ့ရှိပါတယ်။ခြင်တွေကတော့ အမြင်အာရုံကောင်းကြပြီး ညနေပိုင်းအချိန်မှာ အမြင်အာရုံနဲ့ပဲ လူတွေကို ရှာဖွေပါတယ်။ ချက်ခြင်းမြင်တွေ့လွယ်တဲ့ အရောင်တွေဖြစ်တဲ့ အနီ၊အနက်နဲ့ နက်ပြာရောင် ဝတ်ထားတဲ့ သူတွေကတော့ အများဆုံး အကိုက်ခံရပါတယ်။ သွေးအမျိုးအစား အရွယ်‌ရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ ခြင်ထီးတွေကတော့ ဝတ်မှုန်တွေကို စားသုံးကြပေမဲ့ ခြင်မတွေကတော့ ဥဥဖို့အတွက် သွေးကို သူတို့ရဲ့ အာဟာရအဖြစ် သောက်သုံးရပါတယ်။ … Read more
ခေါင်းကိုက်၊ မျက်ရိုးကိုက်၊ ဇက်ကြောတက် လျှင်မြန်စွာပျောက်နည်း
November 8, 2021 by Channel Lover
ခေါင်းကိုက်၊ မျက်ရိုးကိုက်၊ ဇက်ကြောတက် လျှင်မြန်စွာပျောက်နည်း ခေါင်း ကိုက်။ နထင်ကိုက်။ ဇက်ကြောတက် မျက်ရိုးကိုက်။ အလုပ်တစ်ဘက်နှင့် ဆေးခန်းသွားဖို့အချိန်မပေးနိုင်လျှင် ချင်းတက်ကိုပါးပါးလှီးပြီးနထင်နှစ်ဘက်တွင်ကပ်ပေးပါ ။ ဇက်။ဂုတ်ကျီးပေါင်းရှိသူများ။ ကျီးပေါင်းရင့်၍မူးသူ။ ဇက် ကိုခဲဆွဲကုသနေရသူများသည် ဇက်ရင်းကျီးပေါင်းဖုပေါ် တွင်ချင်းကိုပါးပါးလှီးပြီး ၄-၅ နေရာကပ်နိုင်ပါသည် ချင်းတွင်အပူဓာတ်ရှိသည်။ အရောင်ကျစေသောသတ္တိလည်းရှိသည်။ ပိုးကိုသေစေနိုင်သောသတ္တိလည်းထိုက်သင့်သလောက်ရှိပါသည်။ ချင်းသည်အပူဖြစ်သဖြင့် ကပ်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း အာနိသင်ပြပါသည်။ တစ်နာရီခန့်ကပ်ထားပါ။ အများဆုံး အလွန်ဆုံး ၂နာရီထကာပို၍မကပ်သင့်ပါ။ တန်ဆေးလွန် ဘေးဖြစ်ပါသည်။ နေ့စဉ် ၁နာရီခန့်ကပ်ပေးနိုင်ပါသည် ။ ကြည်လွင်မြင့်(မုဒြာ) နောက်တစ်နည်း ခေါင်းသိပ်ကိုက်လျင် (ခေါင်းခဏခဏ ကိုက်နေသူများအတွက် လက်တွေ့ နည်းလမ်းကောင်း) နည်းလေးက အမှန်လွယ်သလို တကယ်ပဲ ထိရောက်ပါသည်။ ထူးထူးထွေထွေ လုပ်စရာလည်း မလိုပါ။ လူတိုင်း လက်တွေ့ စမ်းကြည့်နိုင်တဲ့ နည်းပါ။ … Read more
မယုံဘူးဆိုရင် လက်တွေ့စမ်းသပ်ဖို့ အုတ်ခဲတစ်ခဲနဲ့ ပုဆိုးတစ်ကွင်းပဲ လိုပါတယ်
October 26, 2021 by Channel Lover
မယုံဘူးဆိုရင် လက်တွေ့ စမ်းသပ်ဖို့ အုတ်ခဲ တစ်ခဲနဲ့ ပုဆိုးတစ်ကွင်းပဲ လိုပါတယ်..။ လုပ်ကြည်ပါ။ လက်တွေ့ စမ်းသပ်ဖို့ အုတ်ခဲ တစ်ခဲနဲ့ ပုဆိုးတစ်ကွင်းပဲ လိုပါတယ်..။ ညောင်းငြာကိုက်ခဲသူများအတွက် ဆေးထိုးဆေးစား၊အနှိပ်အနင်းမလိုဘဲ လက်တွေ့သက် သာပျောက်ကင်းစေသောနည်းလေးအား တင်ပြလိုက်ပါသည်။ ကိုယ်လက်ညောင်းညာကိုက်ခဲသူများ၊ဒူးနာခါးနာသူများ အတွက် လွန်စွာအသုံးတည့်ပါသည်။ ကုတင်တစ်လုံးပေါ်တွင် ပက်လက်လှန်အိပ်ပြီး ပုဆိုးတွင်အုတ်နီခဲကျိုး(၁)လုံး(သို့) (၂)လုံးကိုလိပ်ပြီး နဖူးကိုချိတ်ဆွဲပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခါးပတ်ပြားကြီးကြီး၊ကြိုးပြားကြီးကြီးများဖြင့်လည်းဆွဲနိုင် ပါသည်။ လက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်တန်းထားပြီ ခြေနှစ်ဖက်ကိုစုထားပါ။ မိမိခန္ခာကိုယ်ခံနိုင်ရည်ရှိမည့် အလေးချိန် အတိုင်းအတာ ကိုဆွဲကြည့်ပါ။ ဒူး၊ခါး၊တစ်ကိုယ်လုံး အရိုးအကြောများ တရှိန်းရှိန်း နှင့်ပါလာပါလိမ့်မည်။ (၁၅)မိနစ်၊ နာရီဝက်၊(၄၅)မိနစ်စမ်းကြည့်ပါ သိသိသာသာကြီး အကြောအချဉ်များ ပြေခြင်း ၊ဒူးနာ၊ခါးနာများ သက်သာ ပျောက်ကင်းခြင်းကို အမှန်ခံစားရပါမည်။ အမှတ်မထင် မိတ်ဆွေတစ်ဦးအိမ်တွင် ခါးနာသူ တစ်ဦးအုတ်ခဲဆွဲနေသည်ကို မြင်ရ၍မေးကြည့်ရာ အကြောအချဉ်တွေတက်လွန်းပြီး ခါးနာခြင်း … Read more
October 23, 2021 by Channel Lover
ခံတွင်း အနံ့ဆိုး အတွက် သံပုရာသီး (အာပုတ်စော် နံတာ အမြန်ဆုံးပျောက်တဲ့ လက်တွေ့နည်းလမ်း) ခံတွင်း ပုတ်အနံ့ ခံတွင်းပုတ်အနံ့သည် လူတယောက်အတွက် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မူ မဲ့စေပါသည်။ ခံတွင်းအနံ့ မကောင်းသူများသည် လူအများကြားတွင် စကားပြောဆိုရာတွင် မိမိ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ကြောင့်သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာအရပ်တပါး၌ တောရကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့်ကာ၍ စကားပြောနေပါသည် ထို့ကြောင့် အနီးသို့သွားရောက် လျှောက်ထားသောအခါ ရဟန်းမှ မိမိ ၏ ခံတွင်းနံ့ မှာ အလွန်ဆိုးဝါးစွာ ထွက်နေသောကြောင့် လက်ဖြင့်ကာ၍စကားပြောသည်ဟု မိန့်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဖြစ်ပါသလဲ … Read more